Eaus Data Recovery Free by Min Oke Kar - MPPG
Home / Uncategorised / Eaus Data Recovery Free by Min Oke Kar
Eaus Data Recovery Free by Min Oke Kar
minokekar March 25, 2016	Uncategorised 1,426 Views
SD Card က Data တွေ ပျက်ကုန်ပီလား External Harddisk က ဟာတွေရော
Format ရိုက်မိလို့ ပျက်ကုန်တာလား မပူပါနဲ့ ချက်ခြင်း ပြန်ပီး Recovery
ပြန်ခေါ်ပါ.. ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်. Data တွေ ပျက်သွားတာနဲ့
ချက်ခြင်း data တွေဘာ data မှ ပြန်မထည့်ပါနဲ့ . ပျက်သွားတာ သိသိချင်း
ပြန်ပီး recovery ပြန်လုပ်ပါ ……….
ခုကျနော့် ပေးထားတဲ့ဟာနဲ့သာ လုပ်ပါ data တွေ အစီစဉ်လိုက် folder အလိုက်
ပြန်ပါလာပါ လိမ့်မယ် 100 % စမ်းသပ်ပီးသားပါ..
တစ်ခုရှိပါတယ် flashtool firmware တွေပါတဲ့ ဖိုင်တွေ
ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်မှာ Documant နဲ့ Other ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ.
Download Data Recovery Free (13.8) MB
Previous MIRACLE MUST WANTED UPDATE 2.30
Next ZTE AXON Burma Firmware